Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 2 -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 2
Iindibano, umphezulu, amacandelo anqamlezayo, i-cubage. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yemigca kunye nesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenziswa kwiTopography kunye neMisebenzi yoLuntu
Nguwo sibini iseti yezifundo ezi-4 ezibizwa ngokuba yi "Autocad Civil3D yeTopography kunye neMisebenzi yoLuntu" eya kukuvumela ukuba ufunde indlela yokusingatha le software ye-Autodesk emangalisayo kwaye uyisebenzise kwiiprojekthi ezahlukeneyo kunye nemisebenzi yokwakha. Yiba yingcali kwi-software kwaye uya kukwazi ukuvelisa umhlaba, ukubala izinto eziphathekayo kunye namaxabiso okwakha, kwaye udale uyilo olukhulu lweendlela, iibhulorho, i-sewers, phakathi kwabanye.
Le seti yeekhosi ibe iyimveliso yeeyure zokunikezelwa, umsebenzi kunye nomzamo, ukuqokelela idatha ebaluleke kakhulu kwisifundo sobunjineli bobuNtu kunye neTekhnoloji yeTekhnoloji, isishwankathelo semali enkulu yethiyori kwaye uyenze isebenze, ukuze ufunde ngokulula nangokulula. Ukuzila ngokukhawuleza ngeeklasi ezimfutshane kodwa ezithile ezikhethekileyo kwisihloko ngasinye kwaye uziqhelanise nayo yonke idatha (yokwenyani) kunye nemizekelo esibonelela ngayo apha.
Ukuba ufuna ukulawula le software, ukuthatha inxaxheba kule khosi kuya kukugcinela iiveki zomsebenzi ngokwenza uphando ngokwakho, senze iimvavanyo esele sizenzile, kunye nokwenza iimpazamo esele sizenzile.
Masikwazise kweli lizwe le-Autocad Civil3D, esisixhobo esinamandla sokunciphisa ixesha elininzi lokuyila nokubala kunye nokwenza lula umsebenzi wakho kwicandelo lobuchule.
Le khosi ijolise kubuchwephesha, kubuchwephesha nakwingcali ezinolwazi kwiTopography, imisebenzi yoluntu okanye ezinxulumene noko, abafuna ukuqala kwihlabathi loyilo lwendlela, imisebenzi yomgama, imisebenzi yomhlaba kunye nolwakhiwo okanye abo bafuna ukomeleza izakhono zabo kulawulo esi sixhobo sinamandla.
UMNQOPHISO WEKHONDO LISEKELA (2 / 4)
1. IINDIBANO KUNYE NEENTLANGANISO
Inkcazo yeendibano (isakhiwo).
Ulungelelwaniso lwee-sub-assemblies (izinto zohlobo: i-terrace, i-lane, i-curb, i-canal, i-gutter, ibhulorho, i-intersection, njl.).
2. UMSEBENZI WOMNGCA, IMIBONO KUNYE NEZINTO EZISEBENZAYO:
Inkcazo kunye nokwakhiwa komsebenzi womgca.
Umphezulu wepaseji kunye nemida.
3. AMACANDELO OMQWEBO WEMIBUSO
4. INKONZO NOMSEBENZI WOMHLABA:
Cubing kunye neengxelo.
Xa usenza uphando oluphezulu enkundleni, ungangenisa la manqaku omhlaba kwi-Civil3D kwaye ugcine ixesha elininzi ekuzoba.
Yenza indawo yomhlaba kwimilinganiselo ye-2 kunye ne-3 kwaye uvelise ukubala okufana nendawo, ivolumu kunye nomsebenzi wasemhlabeni.
Yakha ulungelelwano kunye nokuma nkqo kweendlela ezivumela uyilo lomsebenzi olungelelanisiweyo onjengeendlela, imijelo, iibhlorho, oololiwe, imigca yombane ephezulu, phakathi kwabanye.
Lungisa iiplani zobuchule bokubonisa imisebenzi kwisicwangciso nakwiprofayile.
Ikhompyuter eneemfuno ezisisiseko ze-Hard Disk, i-RAM (ubuncinci be-2GB) kunye ne-Intel processor, AMD
Isoftware ye-Autocad Civil 3D nayiphi na inguqulelo
Ulwazi olusisiseko lophando, olwaseburhulumenteni okanye olunxulumene nalo
Le khosi yakhelwe nabani na ofuna ukufunda ukujongana nesoftware.
Amagcisa, iiTekhnoloji okanye abaNgcali kubuPhando, abaPhakathi okanye abanxulumene abafuna ukuphucula imveliso kunye nobuchule babo kwisoftware.
Nabani na ofuna ukufunda ukwenza uyilo lwemisebenzi elungelelanisiweyo kunye neeprojekthi zetogragi.
Iikhosi-zooRhulumente baseKhaya Iikhosi zeLizwe 3D
Ikhosi ye-Civil 3D yemisebenzi yoluntu - iNqanaba loku-3
Ikhosi yeModeli yoMkhukula-HEC-RAS ukusuka ekuqaleni